Dhismaha Wasaaradda oo xarigga laga jaray | Wasaaradda Hiddaha & Tacliinta Sare
Dhismaha Wasaaradda oo xarigga laga jaray
Posted on September 8, 2014 by moche
Xaflad ballaaran oo si qu qurux badan loo soo abaabuley ayaa lagu qabtay maanta xarunta wasaaradda hiddaha & tacliinta sare markii ugu horeysay muddo 24 sano ka dib taasi ujeedkeedu uu ahaa in xarigga looga jaro xarunta laguna daah furo barta Internetka wasaaradda.
Wasiiro,xildhibaano,safiiro,hawlwadeeno ka socdey wasaaradaha dawladda,gudoomiyaha degmada Hodan iyo ubax degmada,ururada bulshada rayidka,haweenka,jaamacadaha,daladdaha iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan ayaa goobjoog ahaa xaflada furitaanka xarunta wasaaradda hiddaha iyo tacliinta sare.
Agaasimaha Guud ee wasaaradda Hiddaha iyo Tacliinta Sare oo hadal soo dhaweyn ah ka jeediyey xafladda ayaa ugu horeyn uga mahadceliyey martidii kasoo qeybgashay xafladda kasoo qeybgalkooda quruxda badan isagoo warbixin kooban ka siiyey martida dadaalka ballaaran ee loo galay soo celinta dhismaha wasaaradda oo muddo 24 sano ahayd goob gaadiidka birihiisa lagu iibiyo laguna furfuro.
Wasiirka Wasaaradda Hiddaha iyo Tacliinta Mudane Ducaale Aadan Maxamed oo dhankiisa la hadlay marti sharafta ayaa uga mahadnaqay ka qeybgalkooda kuna tilmaamay xafladdan mid taariikhi ah oo 24 sano ka dib suuro gashay in Tacliinta Sare ee dalka xarunteeda dib loo furey isla markaana wasaaraddu ay qaadey tallaabooyin lagu horumarinayo tacliinta sare iyo dhaqankii asalka ahaa ee dalka.
Mudane Ducaale waxaa kaloo uu tilmaamay in wasaaraddu ay u hawlgashay soo celinta iyo dayactirka akademiyadddii fanka oo ahayd halka dhaqanka Soomaaliyeed lagu baahin jirey waxaa kaloo wasiirku tilmaamay in dhawaan la qorsheynayo bandhig faneed dhanka dhaqanka ah in la qaban doono.
Mar uu ka hadlayey qorshooyinka ku aadan horumarinta Tacliinta sare waxa uu wasiirku xusey in haatan wasaaraddu waddo qorshe qabyo qoraal ah oo ah sharciga Tacliinta Sare ee dalka kaasi oo lagala tashan doono dhamaan hay’adaha Tacliinta sare ee ka shaqeeya dalka si sharciga Tacliinta Sare ee dalka dib u habeyn loogu sameeyo loona helo Guddi heer Qaran ah oo dhanka Tacliinta Sare ka shaqeeya.
Ra’isalwasaare ku xigeenka ahna wasiirka diinta iyo awqaafta Ridwaan Xirsi Maxamed oo hormuud u ahaa xubnihii wasiirada ahaa ee xafladda goobjoogga ka ahaa ayaa isna ka hadlay munaasabadda waxa uuna ammaaney kaalinta wasiirka wasaaradda Hiddaha iyo Tacliinta Sare Ducaale Aadan Maxamed uu ka qaatay horumarinta Dhaqanka iyo Tacliinta sare waxa uuna kula dardaarmay in hawsha meeshaas uu kasii wado.
Mudane Ridwaan ayaa gabagabadii xafladda waxaa uu xarigga ka jarey xarunta wasaaradda isagoo kormeer kusoo sameeyey qaar ka mid ah xafiisyada wasaaradda.